Jaceyl: Erey ban-dhigashadiisu adag tahay!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Sahanka August 18, 2015	0 396 Views
Muqdisho (Himilonews) – Muddo maalmo ah oo ay indhaheedu ka abaarsadeem aragtidiisa, waxay dani ku tiri: iila kac dhankiisa. Saa naf wax jecel Allaa dhibaye, waxay isasoo taagtay duleedka gurigiisa. Waxay deymo-xadaysay sidii ay jaahiisa un ugu bikaacsan lahayd. Hadda oo kaliya ma ahan! Muddaba waxay usoo haliili jirtay dhugashadiisa. Mar kasta oo ay jeedaaliso ama ay sheedda ka aragto wajigiisa halalac nuuraya ayay sida qof tumaati laga qabtay wadnihiisa, waxay neefsataa nafis iyo naruuro.
Ma jecla inay ka ag dheeraato: saa hadana ma jecla inuu soo dhugto. Cabsi ku qafilan qalbi wax jecel ayaa uurkeeda midiidinsaday. Kolkay is tiraa ka dheerow: way cidlootaa—kolkay kusoo dhawaatana way cabsootaa—umana muuqato inay heli karto doorasho labadaas isku xiri karta.
Jaceylkeeda ayaa ka dhashay aragtidii ugu horreysay ee ay deymootay. Wuxuu ahaa qof labiska isku kala badala. Qof hadba maro maalin-galinkeed xiran: galinka kalana maryo kale kusoo muuqda. Xarago-socodka iyo xubno-qurxoonidiisa waxaa usii raacsaneyd in qof walba oo ka horyimaadda uu muuqaalkiisa ku cajabin jiray. Qof had iyo jeer dhoollaha caddeeya. Bulshey dadku ay kusoo ururaan agtiisa. Sidaas ayaana magaca shaxartaan loogu yeeray. Waxaase jiray magacyo kale oo dadku ugu kala yeeran jireen. Magacaas ayaase hal-qabsiga u galay.
Ahaanta ay ahayd qof walaasheed oo xanuunsan tiir iyo taban-taabo u ah, waxay markeedii ugu horreysay timid xaafadda uu Shaxartaan deganaa. Waxay ka timid xaafad aan raad ku yeelan nafteeda. Waxay kaliya is-moodsiin jirtay in nolosha lagu xakameyn karo iyada oo nafta lagu giijiyo cidlo iyo in lagu socdaaliyo howl aan harsi lahayn. Qalbiguna yahay hilib kamid ah hilbaha ku sarcan oogadeeda oo uu macno gaar ah ku sameyn karin nolosheeda. Hayeeshe, kolkii ay xaafadda Shaxartaan imaanaysay, maanay filayn inay halkan ka tegi doonto iyada oo qof kale ah: aragti iyo arami kale oo ugub ahna qalbiga ku sidata. Qalbigaas ay beri ku ogeyd hilib kamid ah hilbaheedana, uu macno gaar ah u yeelan doono.
Kalaba-labeynta ah inay banaanka wax ku meyrato ama ay suuqa u adeeg doonato, waxay ahayd bilowga sheeko taxane ku noqotay nolosheeda: sheeko baal cusub oo nolosheeda ka tirnaa keydka ugu dartay. Ka koobnaanta caruur yaryar, walaasheed iyo iyada—misana dagan guri kiro ah oo dad kale la deris ah—waxay dantu seetisay inay dibadda u baxdo si ay howlaha banaanka ugu agaasiso: kagana baxdo ciriiriga guriga ay ku jiraan. Waloow ciriiri ku dhalan doona qalbigeeda uu ka weynaan karay kan qolofteeda ku gadaaman, hadana dhab ahaan umay filan Karin. Hadday filan laheydna, halka lagu foofo si fudud kuma abaarteen.
Laakiin inay sugayso maalin ay nafteeda ka rogi doonto reeryada naceybka iyo rakaadashada ilo-durduuraya naxariis, naruuro iyo niyad-samaan waligeed ma naawilin. Tani waa maalinta ay xarigga ka goysay qalbi muddaba qarqarsi ugu xirnaa. Waa maalinta ay si lama filaan ah ula kulantay qofkii nolosheeda taxaabsaday.
Sida jeegaan ayuu nafteeda ugu soo muuqday. Isaga oo mar qura ogaalkeedii dhifsaday. May kala saari Karin inuu wax ka weyn ina-Aadam yahay iyo in kale! Fool-samidiisa iyo fariidnimada uu lahaa ayuu qalbigeedii ku xaday. Dareemaheedii indhaha ayaa fariin dagdag ah u diray kuwa ilalaha wadnaha, kahor intaanay maskaxdu gorfeyn wuxuu yahay. Manay ogeyn inuu ku socdo cudur jaceyl la yiraahdo, balse waxay wax yar kadib ogaatay inuu ku dhashay lahasho aysan jiho garaneyn. May garan Karin sida loo qeexo waxa jaceylku ka dhigan yahay. Xittaa astaamihiisu waxay ahaayeen kuwo aysan wali isbitaal u tegin. Waxaa ku adkeyd inay nafteeda u sheegto inay wax tabayso: tebid kaliya ma ahane—hadday tahli wayso hamuun tirashadiisana—ay tiiraanyoonayso. Mar waxay is-tiraa: tani waa waswaas sheydaan xaggiisa ka yimid—marna waxay is-tiraa: waa laab-jeex u baahan in kaniini loo cuno!!
Waxay dhabtii, ugu danbeys, si adag u liqday runta. Run ah inay dhab u jeceshahay Shaxartaan. Taas oo kaliyana ay ku filneyn oo ay u baahan tahay inay u sheegato. Wayse kari la’dahay. Waxayse wali ku taagan tahay inay eegmadiisa laxawsato oo ay dib-isula-rogto lurka caashaqa: cabsidu waa nabarka ugu weyn ee ku hor gudban inay bandhigato lahanka ku qarsoon laabteeda. Waxayna ku qaadan kartaa si fudud inay jaceylkeeda ku sheegato: waxaase adag inay hesho kartida ay ku dhageysan karto jawaabtiisa!!
Inta ay helayso kartida ay ugu ban-dhigan karto lahashadiisa, sheedda ayay waligeed ka eegaysaa deedna dib uga huleeli doontaa xaggiisa!!
Balse sidee ayay ugu suura-gashaa qof markii ugu horreeyey wax jeclaaday inuu jaceylkiisa ku ban-dhigto?!!!!
Previous: Dhibaatada lagu hayo Muslimiinta Rohingya.
Next: Gocashadii Jaceyl ee Cilmi Boodhari
Idaacadda Himilo oo qabanaysa tartan Qur’an Aqris.